Uchungechunge lwe-Liquid Detergent Agitator Series lubunjwe ngembiza ephambili, inkqubo evuselelayo, inkqubo yokufudumeza, inkqubo ye-vacuum, inkqubo yolawulo kunye neqonga lokubeka izinto, njl.
I-agitator ilungele ukuxubana, ukunyibilika kunye nokwenza ulwelo olufanayo lwe-viscous liquids. Inkqubo yokuxuba ixhotyiswe nge-unidirectional okanye nge-bidirectional udonga olususa udonga kunye nolawulo lwamaxesha. Eyona mbiza iphambili inokufudunyezwa ipholile njengoko kufuneka. Lo matshini ulungile kumashishini anjengezinto zokucoca ulwelo, iarhente encedisayo yendwangu, ezempilo kunye nezonyango, ukutya neziselo, iziqholo kunye nobunjineli bemichiza obucocekileyo, njl.
I-JB-100L Ulwelo lokuhambisa amanzi
IVolumu yoyilo (L)
Amandla aKhuthazayo (kW)
Ireyithi eshukumisayo (ngomzuzu)
Ikhabhathi yolawulo lwentsimbi engenasici, ulawulo ngeqhosha
I-JB-200L Agitator yoTywala
I-JB-650L Ulwelo lokuhambisa amanzi
1300L Ulwelo yokuhlamba amanzi
Ukureyitha （R / MIN）
Egqithileyo Umshini emulsifying Umxhubi
Okulandelayo: Ipetroli exutywe namanzi okusetyenziswa kwamandla okonga izixhobo